आयुर्बेदिक | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
मुटु हाम्रो शरीरको इन्जिन जस्तै महत्वपूर्ण अंग हो । मुटुमा कुनै पनि गडबडी हुँदा त्यसले हाम्रो सिंगो शरीरलाई नै धरापमा पार्ने गर्छ । त्यसैले यसको स्वास्थ्य अरू अंगकोभन्दा बढी संवेदनशील हुने गर्छ । ...
बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा पुग्ने हो भने कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रमा राखिएका कोरोना संक्रमितहरूको दैनिकीले धेरैलाई अचम्म मात्रै बनाउँदैन, रोगलाई ठूलोे मान्नु हुन्न भन्ने उत्प्रेरणा पनि मिल्न सक्छ । ...
कुन कुन खानेकुरा एकसाथ सेवन गर्दा विषाक्त बन्छ । जानिराखौ
केही मान्छेहरू समयमा खान नपाएर अस्वस्थ हुन्छन्, धेरै मान्छे पाएको खानेकुरा विधिपूर्वक खान नजानेर अस्वस्थ हुन्छन् । खानामा एउटा विज्ञान छ, यही विज्ञानको आधारमा प्राचीनकालदेखिको हाम्रो खाना संस्कार चल्दै आएको छ । ...
अस्तव्यस्त लाइफस्टाइल तथा दूषित खानपान, तनाव र भागदौडले भरिएको जीवनका कारण तपाईंलाई अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरुले सताउने गर्छ । यी समस्या मध्ये पेट दुखाई एक हो । पेट दुख्ने समस्या अहिलेको समयमा सामान्य बनि सकेको छ । उसो त पेट दुखेमा बजारमा विभिन्न प्रकारका औषधिहरु पाइनछन् । ...
हाम्रा ऋषिमुनीहरु निरोगी र लामो आयुका हुन्थे, कारण यस्तो छ
भनिन्छ, ऋषि मुनीहरु लामो आयु बाँच्थे । जीवनभर निरोगी हुन्थे । किन होला ? किनभने उनीहरुको जीवनशैली एकदमै साधरण हुनेगथ्र्यो । सधै सक्रिय रहन्थे । सकारात्मक रहन्थे । सात्विक भोजन गर्थे । रिस-राग, ईष्या, प्रतिशोध जस्ता मानसिक विकार मनमा पैदा हुन दिदैनथे । ...
होमियोप्याथिक उपचारको प्रभावकारितामाथि किन नजरअन्दाज ?
विश्वकै दोस्रो ठूलो व्यक्तिपरक उपचार पद्धति होमियोप्याथिक उपचार प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वको दोस्रो ठूलो चिकित्सा पद्धतिको रुपमा स्वीकार गरेको यसलाई जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) १५ हजार डलर भन्दा बढी हुने देशमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति ...
स्थानीय जडिवुटी तितेपाती, के-के फाइदा छन् ? जान्नुहाेस्
स्थानीय स्तरमा यत्रतत्र पाइने तितेपाती औषधीको काम मात्र होइन धार्मिक कार्यमा समेत उपयोगी हुने गरेको छ । बास्नादार यो खाने भन्दा पनि शरिरका बाहिरी अङ्गमा प्रयोग गर्न बढी लाभदायक मानिन्छ । तितेपातीको प्रयोग लुतो घाउ खटिरामा यसको पात माडेर ताजा रस लगाउनाले लुतो निको हुन्छ । ...
हाम्रो घरआँगनमा पाइने दुबो यी रोगहरुको अचुक औषधि हो
आर्युवेदका अनुसार चमत्कारी बनस्पति दुबोलाई जुसको रुपमा समेत सेवन गर्न सकिन्छ । दुबोको रसमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्शियम, फाइबर, पोटासियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । हरेक दिन निश्चित मात्रामा दुबो सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक मानिन्छ । ...
मृगौला डायलिसिसको विकल्प बन्न सक्छ केही आयुर्वेदिक फर्मूला
मृगौला रोगीको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । यो यति जटिल रोग हो, जसको उपचार खर्चिलो छ । झन्झटिलो पनि । अन्तिम चरणमा असंभव पनि । ...
मधुमेहलाई जरैदेखि हटाउने सजिलो उपाय र आर्युवेदिक औषधी
हरेक नेपालीको घरमा कोहि न कोहि मधुमेहका रोगी हुनसक्छन् । मधुमेहलाई नेपाली समाजमा ‘खानदानी रोग’ भनिन्छ । खानदानी यस अर्थमा कि,सुख-सयाल वा ऐश आरमपूर्ण जीवन विताउनेहरु यस रोगको सिकार हुनेगर्छन् । ...